Muva nje, othomathikhi jika amasango ziye kwakuqala ukwanda okungavamile phakathi abathengi. Lokhu kungenxa yokuthi kulula ukuyisebenzisa futhi unikeze ubuncane nezithombe Ukungenela komuntu e inqubo ukuvulwa kanye lokuvala. Okuzenzakalelayo jika amasango zidalwe kusetshenziswa eliphezulu ezishintshayo, siyivumele ukuba uvule nge elawulwa kude, ukuze umshayeli wemoto engakwazanga ukuyigwema ngisho ukushiya imoto yakho. Kulokhu, ukusetshenziswa kwamadivaysi anjalo ekahle kakhulu ngenxa yokuthi ngeke wadalula imvula, iqhwa, njengoba ngokuphelele asikho isidingo ukushiya imoto yakho.
izinhlelo ezinjalo ziye zasetshenziswa isikhathi eside. ukusebenza wabo elula kakhulu, asidingi ukusetshenziswa imishayo transverse, njengoba kunjalo nge bendabuko amasango beya. Futhi asikho isidingo ukuhlela bushelelezi asphalt kwamanzi, njengoba okuzenzakalelayo jika amasango kungukuthi ngokuthinta phansi.
Ukufakwa izinhlelo ezinjalo kwenziwa ngokushesha ngokwanele, futhi idizayini lilula. Izimfuneko main ezisebenza ukufakwa yabo - ukuba khona isikhala esanele emnyango. Nge ukukhethwa onobuhle ngokuvamile abalona izinkinga, ngoba kungaba zivuleka evulekile noma isiqondiso. Ukuqinisekisa kuvulwa esangweni ifakwe pair of oshayelayo ukuthi anamekwe ngamunye leaf. Kuwufanele ukusho ukuthi ngemoto angaluboni, isigwedlo noma komugqa. Ukukhethwa somunye ethile luncike izimo zokusebenza. iminyango ngokuhambisa okuzenzakalelayo ngokuvamile asethwe usebenzisa actuators yomugqa, kungenzeka ngakho ukunikeza ukubukeka kakhulu futhi eliphakeme ukusebenza.
Ukuze ukufakwa izinhlelo ezinjalo (kuqala kunazo zonke) liyadingeka ukwakha-eksisi okuhlose uwafake ukuze iqabunga. Kungenzeka ngesimo isitini noma ukhonkolo izinsika kalula ukuzigcina design isisindo, okujwayeleke izimpahla ezingamathani angu-eziningana. Okuzenzakalelayo jika esangweni angavulwa ngezindlela eziningana: ngokusebenzisa-inkinobho ukhiye noma usebenzisa esikude ephathekayo.
NgokoMthetho we-design yalolu hlobo izakhiwo Awunawo imikhawulo, njengoba kungase kube anhlobonhlobo ukuhlukahluka, kuye ngokuphelele kumuzwa yomsebenzisi namandla nethuba lemali eningi. Ngokwesiko amafasitela zenziwa metal, iqinisekisa ukuphila hhayi kuphela eside inkonzo, kodwa futhi ezingeni elifanele abaqashile ukuphepha.
Okuzenzakalelayo jika amasango labo abazokwazi yokuba ukuvikelwa onokwethenjelwa kunayo yonke iyiphi ekhaya. Abenzi kuphela ukunikeza ukuvulwa eliphezulu kanye lokuvala, kodwa futhi ukuphepha impahla. Ngisho okhokho bethu esetshenziswa ezivamile jika amasango, kodwa manje ziye babe othomathikhi obanika ukusebenza isikhathi eside nakakhulu. ukwakhiwa High-grade uyohlale ukunikeza ezingeni efanele sokuphepha ekhaya lakho.
Khama kanye isivikelo ekhaya isisekelo
Dome ekhaya: ukubuyekezwa abanikazi, Price, Isithombe. Dome amakhaya eRussia
Wiring Umdwebo RCD ngaphandle isisekelo: imfundo
Yini amaphayiphi amanzi okugeza kangcono?
Indlela ukupheka inkukhu amaphiko
Kuyini Shako: izakhi hussar imvunulo
Ezimise okwama-tile White: izimbangela, ukwelashwa, imiphumela
Yini wenze aphume amazambane? Lokho uzilungiselele ngokushesha kusukela amazambane? Yini ukupheka kusuka amazambane kanye ukugxusha?
Izidakamizwa "Macropen" (izingane): incazelo, izilinganiso umsebenzisi kanye nokubuyekeza
Ukuhlolwa kokucindezeleka CPU. ukuzinza ukuhlolwa